Asaramanitra eny Iavoloha-EFA FANAON’NY FITONDRANA NIFANDIMBY -
AccueilLa UneAsaramanitra eny Iavoloha-EFA FANAON’NY FITONDRANA NIFANDIMBY
Asaramanitra eny Iavoloha-EFA FANAON’NY FITONDRANA NIFANDIMBY
05/01/2017 hasina La Une, Songandina, Vaovao songadina 0
Hotontosaina ny zoma 6 Janoary ho avy izao, eny Iavoloha, ny fifampiarahabana tratry ny taona karakarain’ny avy ao amin’ny fitondram-panjakana. Mampiavaka ny lanonana ho an’ity taona ity ny fampihenana hatrany hatrany ireo olona nasaina. Raha 1 500 isa mantsy izany tamin’ny taona 2016 dia lasa 1 300 isa izany amin’ity taona vaovao 2017 ity. Fanenana izay tafiditra hatrany amin’ny fampiharana ilay pôlitikan’ny fitsitsiana efa nampiharin’ny fitondram-panjakana nanomboka tamin’ny taon-dasa. Mbola voatazona kosa ny fanasana ireo mpanao pôlitika isan-tsokajiny, ireo masoivoho miasa sy monina eto Madagasikara, ireo andrim-panjakana isan-karazany. Ary tsy azo hadinoina ireo filoha nifandimby nitondra teo aloha. Voalaza fa nahazo fanasana avokoa izy efatra mirahalahy mianaka fa ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc, Ratsiraka Didier ary Zafy Albert no fantatra fa efa namaly ny fanasana.
Marihina fa fomba fanao maneran-tany ny fiarahabana ny Filoham-pirenena nahatratra ny taona vaovao amin’ny maha raiamandreny azy ary isan’ny manamarika izany ny eto Madagasikara. Ary misy hatrany ny tetibola natokana amin’izany ka isan’ny nanao izany fiarahabana izany daholo ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena. Tsikaritra àry fa tsy nahalala an’izany pôlitikan’ny fitsitsiana izany avokoa ireto filoha teo aloha ireto tamin’ny mbola teo amin’ny fitondrana ho fitsinjovana ny fahantran’ny vahoaka malagasy fa isan’ireo nanao fandaniana be indrindra rehefa tonga ny fotoana hanatontosana izany. Raha tsiahivina mantsy, nahatratra hatrany amin’ny 3 000 mahery tany ho any ireo olona nasaina tamin’izany fotoana izany. Saingy efa tsy eo amin’ny fitondrana intsony moa ireto olona ireto amin’izao ka mahay miteny tsara hoe fandanindaniam-poana ity fiarahabana hotontosaina ity.
Tsara ho fantatra hatrany fa ny fotoana fifampiarahabana eny Iavoloha tahaka izao dia fotoana hanaovan’ny mpitondra fanjakana jery todika ny zava-bita nandritra ny taona 2016 eo amin’ny sehatry ny sosialy, teo-karena sy ny pôlitika. Fa ihany koa, fotoana iray hanaovana fanamby entina hanatratra ireo tanjona apetraka hampandrosoana ny firenena.